Izibalo Zesilinganiso se-SaaS Churn ze-2020 | Martech Zone
Sonke sizwile ngeSalesforce, I-Hubspot, noma i-MailChimp. Bayingenisile ngempela inkathi yokwanda Ukukhula kwe-SaaS. I-SaaS noma iSoftware-as-a-service, ukubeka nje, kulapho abasebenzisi bathola isoftware ngokubhaliselwe. Ngezinzuzo eziningi njengokuphepha, isikhala esincane sokugcina, ukuguquguquka, ukufinyeleleka phakathi kwabanye, amamodeli we-SaaS akhombisile ukuthi athela kakhulu amabhizinisi ukuthi akhule, thuthukisa ukwaneliseka kwamakhasimende kanye nesipiliyoni samakhasimende.
Ukusetshenziswa kweSoftware kuzokhula ngo-10.5% ngo-2020, iningi lazo elizobe liqhutshwa yi-SaaS. Ukusebenza kwe-SaaS nefu sekuze kwathola umfutho ngenxa yeCovid-19 enezinkampani ezingama-57% ezihlela ukwandisa ukusebenza kwazo.
I-Gartner futhi UFlexera
Ukukhula kwe-SaaS kungachazwa ngenxa yemiphumela emikhulu etholwe ngokusetshenziswa kwezokumaketha, impumelelo yamakhasimende, ukuthengisa kanye nokugcina. Amabhizinisi we-SaaS angaqhathaniswa nezitshalo. Ukuphila, ukuhlinzeka, ukuvela, ukukhula, kanye nokwenza isivumelwano lapho kufika isikhathi. Futhi njengoba ibhizinisi likhula, amakhasimende nawo eza futhi ahambe. Lawa ma-churn rates angathinta ibhizinisi lakho nokubeka imikhawulo ekwandeni nasekukhuleni kwemakethe.
Isilinganiso se-SaaS Churn: Kuchaziwe
Amanani we-SaaS akhipha amanani, mane abeke, futhi akhombise izinga amakhasimende akho akhona anqamula ngalo / akhansele ukubhalisa kwawo esikhathini esinqunyiwe.
Kuyinkomba yokuthi umsebenzisi utshale imali kangakanani ekunikezeni kwakho ngokusebenza kahle, inhloso, amanani entengo, kanye nokulethwa. Izinga le-Churn linquma phakathi kwezinye izinto, ukuthi yakho umkhiqizo uhlanganyele nekhasimende.
Futhi ekukhuleni kwe-SaaS, isilinganiso sokukhula (ukubhaliswa okusha, ama-upsell, njll.) Kumele njalo kudlule isilinganiso se-churn (abakhanseliwe, ababhalisile abalahlekile).
Njengoba i-SaaS ilindeleke ukuthi ikhule emhlabeni jikelele, ukugcinwa kwamakhasimende kanye nempumelelo yamakhasimende kubalulekile ukuze ukunciphisa amanani we-SaaS churn. Njengoba ukwaneliseka kwamakhasimende kungolunye lokwahlukanisa okukhulu phakathi kwenkampani ephumelelayo nabanye, ulwazi lwamakhasimende seluyinto ebalulekile ekuphumeleleni kwebhizinisi jikelele nokukhula kwenkampani.
Ukugcina unolwazi ngamathrendi wakamuva futhi ufunde ukuthi yini okufanele uyigweme, senze uhlu lwe-10 SaaS Churn Statistics ka-2020.
Ungabala kanjani isilinganiso se-Churn
Kungazwakala kulula, kepha ukubala i-Churn Rate yeSoftware njengesevisi, kunama-nuances athile. Kalula nje, i-Churn Rate inani lamakhasimende ashiye ahlukaniswe inani lamakhasimende ekuqaleni kwesikhathi esilinganisiwe… kubalwa njengephesenti. Nayi ifayili le- Ifomula Yesilinganiso se-Churn:
Izinto okufanele uzigcine engqondweni lapho ubala i-Churn:
Kufanele ukhiphe wonke amakhasimende amasha kulezi zibalo. I-Churn ukuqhathanisa kuphela kwamakhasimende akhanseliwe uma kuqhathaniswa.
Kufanele ubale usebenzisa isikhathi esifanayo, kepha lokho kungaba yinkohliso. Mhlawumbe amanye amakhasimende anezinkontileka zobude obuhlukile, amalungiselelo ahlukile okukhokha, noma okunikezwayo… ungahle uthande ukuhlukanisa ukubalwa ngokuya ngakunye ukuze ubone ukuthi lawo mthelela awuhambi yini.
Kufanele uqhubeke uhlukanise amakhasimende akho ngomxube womkhiqizo noma iphakheji ababhalise kuyo. Lokhu kuzokunikeza imininingwane eminingi yokuthi intengo yakho noma amaphakheji womkhiqizo abe nomthelela onjani ekuqhumeni.
Kufanele ubale isilinganiso sakho se-churn ngokususelwa kumthombo wokuthengisa nokuthi izindleko zokutholwa ziyini. Ungathola ukuthi isilinganiso esinqabile semikhankaso yakho yokuthola kakhulu ekhokhelwayo singenza lelo su lokumaketha lingabambeki empilweni yenkampani yakho.
Kufanele ubale i-churn njalo ukuze ubone ukuthambekela kwakho ku-churn nokuthi ngabe kuyanda (ukugcinwa okungafanele) noma ukuthuthukisa (ukwethembeka kwamakhasimende) ngokuhamba kwesikhathi.
I-Churn akuyona into embi ngaso sonke isikhathi… izinkampani eziningi ze-SaaS zisebenzisa i-churn ukufaka esikhundleni sababhalisile abangenanzuzo ngezinzuzo ezingaphezulu. Ngenkathi ungahle ube nezinga elibi le-churn kulezi zimo, ibhizinisi lakho lizoba nenzuzo enkulu ngokuhamba kwesikhathi. Lokhu kwaziwa njenge Imali engenayo yeNet Negative Monthly Recurring (MRR) Churn, lapho imali yakho engenayo kumakhasimende amasha nalawo akhona idlula imali oyilahlekelayo ngokwehliselwa phansi nokukhanselwa.
Izibalo eziyi-10 ze-SaaS Churn zango-2020
I-SaaS churn nezikhathi zesivumelwano - Izinkampani ze-SaaS ezinezinkontileka namakhasimende ezedlule iminyaka engu-2 noma ngaphezulu kungenzeka zibike amanani aphansi e-churn. Izinkontileka ezinde, ezenziwa minyaka yonke noma ngaphezulu, ziholele kumanani aphansi e-churn ngamamodeli wokubhalisela inyanga yenyanga ahlangabezana nezinga le-churn cishe le-14%. Lokhu kungabalwa ukwethembeka, isipiliyoni somsebenzisi, nempumelelo yomkhiqizo phakathi kwabanye.
Isilinganiso seChurn nokukhula - Izinkampani zokukhula okuphansi kanye nama-start-up maningi amathuba okuthola amazinga aphezulu we-churn. Izinkampani eziningi ezikhula kancane, cishe ama-42%, zibona i-churn ephakeme kunezinkampani ezikhula kakhulu. Lokhu kungabangelwa umkhiqizo, imizamo yokuthengisa, noma izinqubo zokubandakanya amakhasimende.
Isilinganiso se-Churn sonyaka weMedian - Kumabhizinisi enza imali engaphansi kwezigidi eziyi- $ 10 ngonyaka, ama-20% angamazinga aphakathi nonyaka we-SaaS churn rate. Izinkampani ze-Medium SaaS zilahlekelwa amaphesenti angaba ngu-5% kuya ku-7% wemali ezongena minyaka yonke. Lokhu kusho ukuthi, ngaphezu kwezingxenye ezimbili kwezintathu zezinkampani ze-SaaS zazinamazinga we-5% noma ngaphezulu we-churn ngonyaka. Futhi, i-5-7% ithathwa njenge- 'churn eyamukelekayo' ngokuya ngosayizi wenhlangano.
Isilinganiso se-SaaS Churn nokuThengisa - Ubudlelwano bokuthengisa nobamakhasimende buyisisekelo sokugcina iklayenti kanye ne-chuck churn. Ngokuya nge-MarketingCharts, ukuthengiswa kwesiteshi kunenani eliphakeme kakhulu ku-17% ngenkathi isilinganiso sokuthengiswa kwensimu ku-11% kuye ku-8%. Ngaphakathi ukuthengisa kune-churn rate engu-14%. Lokhu kuyaphinda futhi kuqinisekisa ukubaluleka kobudlelwano bamakhasimende kanye nemizamo eyenziwe yaba ngeyakho ekugcineni nokwandisa ukwethembeka kwamakhasimende.
Izinhlelo zokusebenza zeselula ne-SaaS Churn Rate - Izinga lokugcinwa nyangazonke ngezinhlelo zokusebenza zeselula ku-41.5% liyisambulo. Lokhu kucishe kuphindwe izikhathi ezi-4 kunokuhlangenwe nakho komsebenzisi ngama-interface wewebhu ngokusho kwe-Reply.io. Izinhlelo zokusebenza zeselula ezisebenzisanayo ezigxile ekulethweni komkhiqizo zibe nomthelela kulokhu kwehliswa kwesilinganiso se-churn rate
Isevisi yamakhasimende kanye ne-Churn Rate - Ngenkathi ama-47% ancoma ibhizinisi uma linikeza insizakalo enhle yamakhasimende nokuphendula, ama-42% ashiye ukubhaliswa kwe-SaaS ngenxa yensizakalo yamakhasimende empofu. Abasebenzisi manje bafuna ukuthi isipiliyoni sibe yiso esisiza impumelelo yamakhasimende. Kunesidingo sokuthuthukela empumelelweni yamakhasimende ukunciphisa amazinga we-churn.
Inani Lamakhasimende Namanani E-Churn - Cishe i-69% yezinkampani ze-SaaS zibheka inani lamakhasimende ngenkathi zilinganisa amanani we-churn. Ama-62% asebenzisa imali engenayo njengezilinganiso zawo eziyinhloko ukuqonda amazinga we-churn. Ngaphandle kwalokhu, amalayisense abasebenzisi futhi enye indlela yokukala amanani we-churn.
Ukutholwa Kwamakhasimende okusha namanani we-Churn - Izinkampani zibeka phambili ukuthengwa kwamakhasimende amasha ukuze ziqhubeke zisebenza futhi zenze ngcono izinombolo. Kuphela ngama-59% amanani okuvuselelwa kwamakhasimende akhona nokwaneliseka njengokubekwe eqhulwini. Lokhu kuntuleka kwempumelelo yamakhasimende kunomthelela emazingeni aphezulu e-churn. Ukuthengisa nokuthengisa ngaphesheya kunethuba eliphezulu lokukhulisa ibhizinisi.
Isilinganiselo esisheshayo se-SaaS - Amafemu amaningi akhula ngokushesha e-SaaS anesilinganiso Esisheshayo Esisheshayo esingu-3.9 kuye ku-1. Yize isibonakaliso seMamoon sokuthembisa izinkampani ze-SaaS singu-4, izinkampani zikhombise imiphumela emihle ngokwenza imali elahlekile ukuze ikhishwe.
Amanani akhuphukile e-Churn - Ngenkathi izinkampani ezingama-34% zibone ukwehla kwamanani azo, kodwa ama-30% abike ukuthi amanani azo akhuphukile. Kungaphawulwa futhi ukuthi izinkampani eziningi ezibika amanani aphezulu e-churn zikhiqize imali engaphansi kwezigidi eziyi- $ 10.
Ngezansi: Yenza induku yakho ye-SaaS
Kunesidingo sokubona ukuthi ukugcinwa kwamakhasimende, ukwethembeka, nokuphumelela kuyizikhiye ekukhuleni kwebhizinisi nempumelelo. Ngokusebenza isipiliyoni samakhasimende kusenesikhathi, umuntu anganciphisa amanani we-churn. Kubalulekile futhi ukusiza amakhasimende akho ukuthi ahlanganyele ne-SaaS yakho ukuze bakwazi ukuthola imininingwane ebalulekile futhi bamukele nempendulo yabo ukuthuthukisa ulwazi lomsebenzisi nokwakhiwa komkhiqizo. Ukuxazulula izinkinga zomsebenzisi nokusetshenziswa kokulinganisa kungasiza ekwehliseni amazinga we-churn futhi kuthuthukise ukukhula.
Tags: abale isilinganiso se-churnukubalwa kwe-churnsaassaas churnamanani we-saas churnizibalo ze-saas churnskas isilinganiso esisheshayo